Sorafenib Cas 284461-73-0 Qiime, Badeecad ka timid Bolise
[CAS MAYA. ] 284461-73-0
[Foomka Molecular] C21H16ClF3N4O3
[Miisaanka Molecular] 464.83
[Cufnaanta] 1.454 g / cm3
[Goobta Dhalashada] 225-235ºC
[Barta karkarinta] 523.3ºC at 760 mmHg
[Cadaadiska Uumiga] 4.76E-11mmHg oo ah 25 ° C
Ku saabsan Sorafenib
Sorafenib waa shey isku dhafan oo bartilmaameedsanaya calaamadaha koritaanka iyo angiogenesis. Sorafenib wuxuu xannibayaa enzyme RAF kinase, oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah dariiqa RAF / MEK / ERK ee tilmaamaya qaybinta unugyada iyo kororka; intaa waxaa sii dheer, sorafenib wuxuu xakameynayaa VEGFR-2 / PDGFR-beta signaling cascade, oo markaa xannibaya burooyinka angiogenesis. Sorafenib waxaa la ansixiyay 2005 si loogu isticmaalo daaweynta kansarka kalyaha ee horumarsan.